Dixsi bisadaha | Bisadaha Noti
Monica Sanchez | | Cudurada, Tricks
Dhamaan dulinleyda aadka u dhibi kara bisadahayaga, shaki la’aan waa kuwa boodada. Cadowyadan yaryar ee eeyahayaga dhogorta badan waxay si tartiib tartiib ah oo dhakhso leh u tarmaan, sidaa darteed haddii aan waqtigooda la xakamayn, waxaan ku dhici karnaa balaayo, xayawaanka oo keliya, laakiin sidoo kale guriga.
Daryeelkaaga aawadiis, iyo sidoo kale taada, mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in la sameeyo, gaar ahaan bilaha kuleylka, waa deworm codsashada dhuumaha ama buufinta cayayaanka lagu buufiyo si loo ilaaliyo. Waana in boodada bisaduhu ay noo horseedi karaan dhibaatooyin badan oo aan ku xallin karno tabaha aan ku siinayo tilmaamahan. Maxaa intaa ka badan, waxaad baran doontaa sameynta cayayaanka dabiiciga ah, kaasoo waxtar badan yeelan doona haddii dhogortaadu xasaasiyad ku leedahay dhuumaha iyo buufinta kiimikada.
1 Waa maxay boodada?
1.2 Meertada nolosha
2 Cudurada ay sababi karto
3 Sideen ku ogaan karaa in bisadaydu leedahay boodada?
4 Ka Hortagga Dhirta ee Bisadaha
4.1 Kiimikada sunta lagu buufiyo ee lagula dagaallamo boodada bisadaha
4.1.4 Buufinta antiparasitic
4.2 Sunta cayayaanka ee dabiiciga ah
4.2.1 Daawooyinka guriga loogu talagalay boodada bisadaha
4.2.1.2 Khamiirka Brewer
4.2.1.3 Geedka Shaaha saliida lagama maarmaanka ah
Waa maxay boodada?
Si wanaagsan looga hortago cudurka daacuunka, waxaa aad loogu talinayaa in si fiican loo ogaado. Sidan ayaa noo sahlanaan doonta inaan ogaanno dhibcihiisa daciifka ah, waxaanna sii wadi karnaa inaan daaweyn ka hortag ah ku sameyno bisadeena waqtiga ugu habboon. Markuu sidaa yidhi, Runtii ma garanaynaa boodada maxay tahay?
Fleas waa cayayaan yaryar (qiyaastii 3mm dheer), oo aan lahayn baalal, kana tirsan amarka Siphonaptera. Waxay quudiyaan dhiigga naasleyda taas oo ay ugu wacan tahay farsamo afka ah oo loogu talagalay in lagu soo nuugo dhiigga dadka martida loo yahay, iyo sida haddii aysan taasi ku filnayn, ku dhowaad 2000 nooc ayaa laga yaqaan adduunka oo dhan. Ku darida cayda dhaawaca, qaar ka mid ah waxay u gudbiyaan cudurro cabsi leh sida daacuunka bubonic, gawracatada ama duufaanta. Midabkoodu waa madowyahay, tusaale kuwa bisadaha dhibaya midabkoodu waa casaan.
Lugihiisu waa dhaadheer yihiin, diyaarna u yihiin inay sameeyaan boodbooyin waaweyn (illaa 34cm jihada jiifka ah, iyo 18cm dhinaca toosan). Waa markaa, xayawaanka safri kara kan ugu dheer hal boodbooyin laxiriira cabirkiisa. Maaddaama jirkeeda la isku cadaadiyo dhinaca dambe, wuxuu ku socon karaa isagoo aan la arkin dhogorta martida.
Booggu waa cayayaan wareega nololeedkoodu isbeddelo, iyo wax soo saar badan. Laga soo bilaabo markay yihiin ukunta ilaa ay weynaadaan, waxay qaadan kartaa laba toddobaad inta lagu jiro bilaha diiran, illaa sideed bilood haddii cimiladu qabow tahay. Dumarku waxay jiifaan 20 ukumood oo cajiib ah maalin kasta markay quudiyaan ka dib; noloshiisa oo dhan wuxuu gelin doonaa ilaa 600, kaas oo dillaaci doona ilaa 10 maalmood ka dib dhigista.
Intay yihiin dirxiga, wax dhib ah ma keenaanmaadaama aysan dhiig ka jaqin. Waxay kaliya quudiyaan dhogorta iyo maqaarka dhintay, saxarada boodada dadka waaweyn, iyo qashinka kale. Laakiin maalmo yar gudahood waxay noqonayaan puppy, waxaana lagu ilaalin doonaa shukulaatadooda inta ay gaaraan heerka qaangaarka 14 maalmood gudahood haddii cimiladu wanaagsan tahay; haddii kale, taasi waa, haddii ay tahay jiilaal oo heer kulka uu ka hooseeyo 10ºC, waxay ku qaadan doonaan sida dirxiga ama pupae, iyo guga waxay ku dhammayn doonaan horumarkooda.
Cudurada ay sababi karto
Fleas caadi ahaan uma keento wax ka badan-cabsi-xanaaq badan martida, laakiin waa in lagu tixgeliyaa inay gudbin karaan cudurrada, sida cudurka bubonic ama qanjirka 'typhus'. Bisadda boodada, oo magaceeda cilmigu yahay Ctenocephalides felisIntaa waxaa dheer, waxay u gudbin kartaa lahaa.
Waxay sidoo kale ku keeni karaan in ka badan hal raali saaxiibbadeen. Cudurada boodada ay u gudbin karto bisadaha waa:
Filariasis: waa nematodes infekshiya unugyada subcutaneous iyo wadnaha; dhab ahaan waxaa loo yaqaan magaca 'cudurka wadnaha wadnaha'. Astaamuhu waa: qufac dabadheeraad ah, neefsashada oo si caadi ah u qabata, cunto xumo, iyo taxaddar la'aan. Haddii aan lagu daaweynin waqtiga, waxay noqon doontaa in la dhexgalo.
hemoplasmosis: waa bakteeriya saameysa nidaamka xididdada dhiigga. Bisadaha cudurka qaba waxay noqonayaan kuwo liita, miisaan lumiya, qandho leh, xaaladaha daran waxaa laga yaabaa inay yeeshaan anorexia.
Dipylidiosis: waa dulin ku dhaca xiidmaha oo loo yaqaan 'tapeworm'. Waxay ku hoyataa xiidmaha bisadda oo waxay quudataa wuxuu nuugo. Ma jiraan calaamado muuqda, marka laga reebo cuncunka dabada oo kugu qasbaya inaad fadhiisato oo aad dhulka ku gurguurto.
Cudurka 'Flex Bite Allergic Dermatitis' (FAD): Waa cudurka ugu halista badan afarta, laakiin ugu badan. Dareen-celinta waxay dhacdaa markii boodh nuugo dhiigga bisadda, oo bilaabi doonta cuncun aagga ay dhibaatadu saameyseyna uu bararsan doono, midabkiisuna guduudan yahay Intaa waxaa dheer, waxaad arki doontaa sida ay u leefleexdo marar badan iyo xoqitaan isku dayaya in ay yareeyaan cuncunka. Markuu qabo cudur ba'an, waxaan arki doonaa inay jiraan meelo aan timo lahayn oo ku yaal jirka xayawaanka.
Sideen ku ogaan karaa in bisadaydu leedahay boodada?
Bisad leedahay boodada waxay isu rogi doontaa xayawaan noqon kara mid kacsan, degenaansho la'aan ah, iyo xitaa dagaal badan marka cayayaanku aad u horumaro. Laakiin calaamadda ugu horreysa ee noo sheegi doonta inay leedahay waa taas waqti ku qaadashada xoqida. Waxaad ku sameyn kartaa xoog weyn, taas oo sababi karta boogta marmar aagga ay dhibaatadu saameysey.
Hab wax ku ool ah oo aad u dhakhso badan oo lagu ogaado haddii ay leedahay waa iyada oo la mariyo shanlada kor u qaadaysa timaheeda. Haddii aad ku aragto dhibco madow oo dhaldhalaalaya dhabarkiisa, dhagaha gadaashiisa, salka dabadiisa ama caloosha, markaa majiro xulasho aan ka ahayn in isaga uwrto.
Ka Hortagga Dhirta ee Bisadaha
Maaddaama uusan qofna doonaynin inuu boodh ku haysto gurigiisa iyo in bisadoodu aysan ku khasbanayn inay ku dhibtooto, waxa ugu wanaagsan ee aan sameyn karno ayaa ah ka hortagga. Sidee? Waa hagaag, waxaa jira laba siyaabood: kiimiko ahaan y dabiiciga ah.
Kiimikada sunta lagu buufiyo ee lagula dagaallamo boodada bisadaha
Dukaammada xayawaanka iyo rugaha caafimaadka xoolaha waxaad ka heli doontaa iib dhuumaha antiparasitic, silsilado, kiniinno iyo buufinno. Mid waliba wuxuu leeyahay faa iidooyin u gaar ah iyo waliba cillado uu leeyahay, sidaa darteed waxaan si faahfaahsan ugu arki doonaa iyaga oo gooni ah
Way fududahay in la dalbado, illaa iyo inta bisadu aysan cabsanayn 🙂. Xayawaanka ayaa si taxaddar leh loo hayaa laakiin si adag, timaha ayaa laga soocayaa qoorta (xagga dambe), badeecadana waa la adeegsadaa. Waxay leeyihiin waxtar hal bil ah, runtuna waa taas aad bay waxtar u leeyihiin, gaar ahaan haddii aad banaanka u baxdid.
Si kastaba ha ahaatee, aad uga taxaddar inaadan dhigin meel laga gaari karo, maadaama haddii kale aad sakhraansan tahay.
Koolajyada ayaa waxoogaa ka raqiisan boodhadhka, waxaana si aad ah loogu taliyay markii aan rabno inaan hubinno in bisadeena aysan qabsan doonin mar kasta oo uu u baxo barxadda. Waxay sidoo kale wax ku ool yihiin muddo bil ah, sidaa darteed ugu yaraan 4 toddobaad waan xasilloonaan karnaa.
Dhibaatadu way muuqan doontaa haddii aan u oggolaanno inay banaanka u baxdo. Marar badan silsiladahaasi ma laha quful amni, haddii aad qabatana ... Dhibaatooyin badan ayaan la kulmi lahaa. Marka, haddii aad iska dhaafto, hubi inaad ku soo iibsato silsilad leh cayn caynkan ah.
Kiniiniyada ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa 'miciinka ugu dambeeya'. Marka bahalka boodada ee bisadaha ay muhiim tahay, ama haddii aad badanaa haysato badan, kaniiniyada ayaa kaa caawin doona inaad ku noolaato nolol nabad ah, adigoon waxbadan ka walwalin dulinla'aan. Saameynteedu waxay socon kartaa 1 ilaa 3 ama 6 bilood iyadoo kuxiran midka aad siiso.
Haa, waligaa ha siinin saaxiibkaa ogolaansho la'aan dhakhtarkaaga xoolaha ahmaadaama ay sababi karto falcelin xasaasiyadeed oo nafta halis gelisa.
Si balaaran ayaa loogu isticmaalay hatcheries, hoyga xoolaha iyo ilaaliyaasha waxtarkeeda iyo qiime jaban. Waa ikhtiyaar aad u wanaagsan marka aan dooneyno inaan lacag yar keydinno, oo bisadda ka dhigno boodh xor ah.
Laakiin ... (wax walbaa waxay leeyihiin laakiin), aad uga taxaddar indhaha, sanka, afka iyo dhegahaHaddii kale waa inaan u geynaa dhakhtarka xoolaha si aan u baarno.
Sunta cayayaanka ee dabiiciga ah
In muddo ah hadda, waxaa sii kordheysa wax caadi ah in la helo cayayaan dabiici ah oo aan wax dhibaato ah u geysan xayawaanka. Silsiladaha, dhuumaha, buufinta ... ee loo maamulo si la mid ah kiimikooyinka, laakiin kaga duwan iyaga oo ah dabiici ahaan, taas oo ah, Xitaa haddii bisaddaadu leefleexdo xoogaa dareere ah oo ka yimaada dhuumaha dabiiciga ah, waxba ku dhici maayaan
Iyagu waa kuwa ugu habboon ee loogu talagalay bisadaha xasaasiyadda ku leh, iyo sidoo kale kuwa guriga jooga maalintii oo dhan. Cilladaha kaliya ee jira ayaa ah waxtarkeedu waa sii yaraanayaa, markaa daaweynta waa in lagu celceliyaa badanaa (caadiyan, hal mar 15-kii maalmoodba mar), iyo in haddii dhogorta ay dibadda u baxdo badanaa waxtar badan ma leh. Laakiin iyagu aad ayey qaali u yihiin, runtiina waxay tahay inay mudan yihiin in la isku dayo.
Hase yeeshe, haddii aadan rabin inaad lacag qarash gareyso oo aad doorbido inaad sameysid cayayaanka dabiiciga ah ee gurigaaga, halkan waxaad ku leedahay dawooyin boodh oo kala duwan.
Daawooyinka guriga loogu talagalay boodada bisadaha
Dulinka noocan ahi ma jecla urta liinta gabi ahaanba. Liin jarjar xaleef oo ku kari karkar dheriga. U oggolow iyaga inay seexdaan habeennimada, maalinta ku xigta, maro ama isbuunyo, ku maydh bisaddaada.
Hodan ku ah fitamiin B1, kaa fogeyn doonta boodada bisaddaada. Ku dar qaaddo yar oo ku qaso cuntadaada caadiga ah maalin kasta, waadna macsalaameyn kartaa dulinimadan noocan ah waligood.
Geedka Shaaha saliida lagama maarmaanka ah
Waa mid ka mid ah daaweynta dabiiciga ah ee ugu wax ku oolka ah boodada bisadaha, waana sahlan tahay in la dalbado. Qaado buufin saliid geedka shaaha ah, waxaadna kaliya ubaahan doontaa inaad ku buufiso bisaddaada adigoo iska ilaalinaya taabashada indhaha, sanka, afka iyo dhagaha.
Ma ogtahay in shaaha chamomile uu diido boodada? Maya? Samee faleebo oo, sida ugu dhakhsaha badan ee ay biyuhu u diirran yihiin, ku qoyso isbuunyo ama maro kuna dhex tirtiro jidhka xayawaanka.
Fleas waa dulinno ay tahay inaan la macaamilo sanadba sanadka ka dambeeya. Kaliya maahan inaan ilaaliyo bisadaha, laakiin sidoo kale eeyadayda. Waxaan xasuustaa hal sano, 2010 ama wixii ka dambeeyay, waxaan ku helnay belaayo guriga. Waxay ahayd mid ka mid ah waaya-aragnimadii ugu xumaa noloshayda. Waxay ahayd inaan dhaqno dhammaan go'yaasha, marada miiska, dharka…, oo aan ku xoqno sagxadda dhulka maalin kasta. Sikastaba, nasiib wanaag looma baahneyn in la waco adeega la dagaalanka cayayaanka, laakiin dhuumaha aan ku dhejiyay bisadaha ayaan waxtar badan lahayn waqtigaas.
Fiidiyowgaan waxaad ku ogaan doontaa sida loo baabi'iyo boodada laga yaabo inay ku jiraan guriga adoo isticmaalaya daaweynta guriga:
Ma dhihi karo in sunta cayayaanka ee dabiiciga ama kiimikada ay kafiican tahay la dagaalanka boodada bisadaha. Waxay aad uguxirantahay halka xayawaanku ku noolyahay iyo hadii loo ogolaado inuu banaanka u baxo iyo hadii kale. Xaaladdayda, ma aanan haysan wax aan ka ahayn in aan ku dhejiyo tuubooyin kiimiko ah, tan iyo markii ay dibadda u baxaan, kuwa dabiiciga ahi wax badan kama caawiyaan markay duurka ku jiraan. Laakiin haddii dhogortaadu had iyo jeer guriga joogto, taladaydu waa taas ka dhig mid dabiici ahSidan oo kale, waad iska ilaalin doontaa inaad gasho khataro aan loo baahnayn.
Iyadoo aan loo eegin sheyga aad dooratay, waa muhiim in weydii dhakhtarkaaga caafimaadka wixii talo ah Maaddaama uu ogyahay taariikhdaada caafimaad ee bisaddaada isla markaana uu kuu sheegi doono midka kuugu habboon.
Qofna ma doonayo inuu arko boodada bisadaha, laakiin ma lihin xulasho laakiin sida ugu fiican ee aan u qaadi karno, ama sunta cayayaanka lagu buufiyo, ama ku diyaarinta daawooyinkeena guriga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Cudurada » Xayawaanka bisadaha
Waan jeclahay iyaga oo taydu ku dhowdahay laba sano. Waxaan dhigay shaambo boodh iyo buufis bahal ah.Waxaan haystaa mid uusan naftiisa u oggolaan inuu maydho.Waxaan siiyaa meox isku darka cuntada.
Ku jawaab macaan
Sida loo ogaado haddii bisadaydu leedahay fayraska parvo
Miyaad u maleyneysaa inaad wax walba ka ogtahay bisadaha madow? Ha kaa yaabiso